Uyisebenzisa kanjani inkonzo "Yokufumana i-iPhone yam" | IPhone iindaba
Uyisebenzisa kanjani inkonzo "Fumana i-iPhone yam"
Iindaba ze-IPad | | iOS 6, Izifundo kunye neencwadana
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele Iimpawu ezintsha zokufumana inkonzo yam ye-iPhone kwi-iOS 7, ephucula ukhuseleko ngokuqinisekisa ukuba akukho mntu unokucima inkonzo ngaphandle kwesitshixo sakho se-iCloud, okanye nokuba bekwazile ukubuyisela isixhobo, abanakuyisebenzisa ngaphandle kwesitshixo. Emva kwenqaku, baninzi kuni abaye babuza malunga nemisebenzi ethile yenkonzo, ke siza kubonisa ukuba isebenza njani kwi-iOS 6, kuba lukhetho ekufuneka silwenzile sonke njengoko ngamanye amaxesha kunokwenza ukuba ubuyisele isixhobo sakho esilahlekileyo.
Fumana i-iPhone yam lukhetho ekufuneka ulwenzile yenza isebenze kwipaneli yokuseta ye-iCloud yesixhobo sakho. Nje ukuba isebenze, iya kuhlala ngasemva okoko isixhobo sivuliwe, kwaye amaxesha ngamaxesha iya kusifumana isixhobo sakho ukuze usifumane xa kukho ilahleko. Kodwa ndingabona njani ukuba siphi isixhobo sam ukuba ndilahlekile? Unamathuba amabini: ukusebenzisa isicelo "Fumana i-iPhone yam", yasimahla kwaye iyahambelana ne-iPhone kunye ne-iPad, okanye ukusebenzisa nasiphi na isikhangeli sewebhu kunye nekhompyuter yakho.
Kuzo zombini iimeko kuya kufuneka ufikelele kwiakhawunti yakho ye-iCloud, enye onayo kwisixhobo esilahlekileyo. Masisebenzise inguqulelo yesikhangeli njengomzekelo. Kuya kule dilesi ilandelayo: http://www.icloud.com kwaye ungene ngeakhawunti yakho iCloud kunye negama lokugqitha. Emva koko ucofe ku «Fumana i-iPhone yam».
Imephu iya kuthi ivele nazo zonke izixhobo onazo ngeakhawunti ye-iCloud kwaye "Fumana i-iPhone yam" isebenze kuseto. Khetha isixhobo esilahlekileyo kwaye ofuna ukusifumana.
Kwimeko yam siza kufumana i-iPad yam. Ukongeza ekubonakala kwimephu, siya kuba nefestile enokukhetha ezinye:
Isandi sokukhupha: ukuba uyilahlile ekhaya kwaye ufuna ukuyifumana ngokulula.
Cima i-iPad: ukuba awufuni nabani na abe nakho ukufikelela kumxholo wayo, yicime ukude ngokucinezela elo qhosha.
Imowudi elahlekileyo ifanele inkcazo ebanzi, kuba ibonelela ngeendlela ezininzi.
Into yokuqala, ukuba awunayo itshixiwe ngekhowudiNjengakwimeko yam, ikucela ukuba ufake ikhowudi yokutshixa ukuze kungabikho mntu uyivulayo ngaphandle kokwazi.
Emva koko iya kukubuza faka inombolo yefowuni apho banokukutsalela umnxeba xa umntu enokufumana.
Kwaye ekugqibeleni, unako bhala umyalezo Ukuboniswa kwiscreen sokutshixa.
Nje ukuba ugqibile, nabani na one-iPad yakho uya kuyibona le sikrini, ngombhalo owubhalileyo kunye nenombolo yefowuni ebonisiweyo, kwaye ngaphandle kokukwazi ukuyivula kuba inesitshixo sokuvula. Lo msebenzi uyahambelana nayo nayiphi na i-iPhone, i-iPad, iPod Touch kunye neMac.Xa iOS 7 ifika ingenaNgamanyathelo amatsha okhuseleko akhankanywe apha ngasentla asebenza, kuya kuba nzima kakhulu kumntu ongagunyaziswanga ukuba asebenzise isixhobo esibiweyo okanye esilahlekileyo seApple, iindaba ezimnandi.
Iinkcukacha ezithe xaxe - IOS 7 kunye Fumana i-iPad yam ukunqanda ukubuyisela isixhobo sakho ngaphandle kwemvume yakho
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 6 » Uyisebenzisa kanjani inkonzo "Fumana i-iPhone yam"
Molo, ndinengxaki yokufumana iphone yam kwi-iphone 5 ene-ios7 beta 2, yonke into ilungile de kube lixesha lokukhetha i-ipad okanye i-iphone kwiakhawunti, inkqubo iyavala. Nge-Ipad ene-ios 6.1.1. Isebenza ngokugqibeleleyo. Ndinengxaki neBeta 2 kwimeko yam okanye ayisebenzi kakuhle. Imibuliso kubo bonke. UDaniel
Fumana i-iPhone yam inenguqulo yonjiniyela esebenza neBeta. Unayo kwiphepha labaphuhlisi. Uhlobo oluqhelekileyo alusebenzi.
Enkosi Luis ngokuphendula kwangoko. Ngaba ikhona indlela yokuba nale app ngaphandle konjiniyela? Ukubulisa.
Ndiyazibuza ukuba lo msebenzi uza kuyichaphazela njani ibhetri ye-iPhone yam, kuba kubonakala ngathi ndiyiqonda ukuba ihleli ngasemva ...
Ihlaziya kuphela isikhundla rhoqo rhoqo. Khange ndiwubone umohluko phakathi kokuyivula nokungabinayo.
UJorge Mendez sitsho
Molweni, uxolo, ndiyithengile ipad yam esetyenzisiweyo, kodwa ifuna ipassword ye-icloud, kwaye khange bandinike yona, ukuba ndiyibuyisela nge-ituns, ingaba izolungiswa? ngokubhekisele!
Phendula Jorge Mendez
Kwenzeka ntoni ukuba bacima i-iPhone yam okanye basusa i-chip? isicelo sisasebenza okanye uphawu lweGPS lulahlekile kwaphela.
Ukuba icinyiwe akuyi kubakho mqondiso, nokuba ayisebenzi kwi-Wi-Fi okanye ngedatha.
UBen de la Fuente sitsho
Ndingayifumana njani i-iPhone yam ukuba ibonakala imnyama emephini oko kuthetha ukuba ikumnxeba, sisangqa esimnyama kwaye phantsi kwesangqa kukho indawo. Ngenye imini xa ndandifowunelwe, h ngezantsi wayeluhlaza kwaye wayeyintombi, kwaye andazi ukuba ndiyenze njani, ndifuna ukuyenza kwakhona, ayisebenzi »» ', .. Uyayazi indlela yokwenza … ..
Phendula uBen de la Fuente
Molo! Ndenza uvavanyo ngale nkqubo, kwaye saqonda ukuba kwindawo yomsebenzi womyeni wam inkqubo ikhangela i-iPhone yam ivela ngaphandle kwalapho akhoyo. Kukuphela kwendawo apho indawo yakhe ingekho ngqo kwaye kukho isangqa esiluhlaza kakhulu kodwa ayisiyiyo apho akhoyo! Ungandixelela ukuba kutheni kusenzeka oko?
I-flash yangaphandle ye-LED yokuphucula iifoto ezithathwe nge-iPhone yakho
I-Motion Tennis, umdlalo osivumela ukuba sisebenzise i-iPhone njengerakhi